WAR CULUS: Raaskambooni oo sheegay in Wasiirka Gaashandhiga uu ka dhuunta Kismaayo iyo Baadi goob loogu jiro | warsugansomaliya.wordpress.com
Wararka naga soo gaaraya dhanka Saraakiisha Ciiddamadda Raaskambooni, ayaa sheegaya in Wasiirka Difaaca Xukuumadda Soomaaliya, Cabdi Xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, uu ka baxsaday gabi ahaan Magaallada Kismaayo, isla markaana aan meel lagu sheegin Heebtiisa.
Haddalka Saraakiisha Raaskambooni, ayaa waxa uu sidoo kale, sheegayaan in iminka ay Saraakiisha Baadi goob ugu jiraan Helitaan Wasiirka Gaashandhiga Somalia, oo ka baxsaday Kismaayo.
Dhanka kale, Wasiirka Gaashandhiga Cabdi Xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, oo la hadlay Warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in Xilligaani uu ku suganyahay Magaalada Kismaayo ee Xarunta gobalka J/hoose uuna ku hawlan yahay Xalinta Khilaafaadka iyo Dagaalka ka socda Kismaayo.
Wasiirka Gaashandhiga ayaa waxa uu Meesha ka saaray war uu war-baahinta siiyay Afhayeenka Maleeshiyaadka Raas-kanbooni, Cabdi Naasir Seeraar oo ahaa in wasiirku uu magaalada isaga baxsaday oo uu Muqdisho soo aaday kadib sida uu hadalka u dhigay markii uu fowda uu magaaladaasi ka kiciyay.
Haddalka Afhayeenka ayaa waxa uu imaanaya ka gadaal markii uu Axmed Madoobe, Natiijo qancisa ka waayay Dowladda Somalia, gaar ahaan Madaxweyne Xassan oo ay ku kala tageen Afkaarta Jubbalan.
Seeraar ayaa yiri, “Wasiirka difaaca maamulka Muqdisho ayaa waxa uu halkaan ka qarxiyay dagaal isaga oo Shabaab soo hubeeyay. Markii uu ogaaday in uu ku guuleestay hadafkiisiina magaalad waa isaga baxsaday oo Muqdisho ayuu u duulay”.
“Kismaayo ayaan ku suganahay waxa aanna halkaan u joogaa sidii ciidamada qalabka sida ee gobaladaan jooga aan u hor mari laheyn. Waa been abuur in aan magaalada ka baxsaday iyo in aan qas iyo jaha wareer wado.
Ugu dambeyntii Wasiirka ayaa waxa uu wacad ku maray inuusan kasoo bixi doonin Kismaayo isaga oo aan xalin Khilaafka ka dhexeeya Madaxweynayaasha Jubbaland.
Q.sugulle mhamoud abdi
← FAAH FAAHIN: Qarax Maanta lala eegtay Masuuliyiin ka tirsan Maamulka G/Banaadir
TOP VIDEO: Axmed Madoobe oo si kulul u weeraray Dowlada Madaxweyne Xasan Sheekh →